होटल "Splendid" (मोन्टेनेग्रो, Becici): विवरण र पाहुनाहरूको समीक्षा
होटल "Splendid सम्मेलन" Becici को शहर मा, मोन्टेनेग्रो मा स्थित छ। यो 2006 मा खोलिएको थियो। उहाँले पहिलो पाँच-तारे युरोपेली वर्ग को Adriatic समुद्र को पूर्वी तट मा जटिल भयो। को बुद्ध को शहर - "Splendid" (मोन्टेनेग्रो) को होटल पर्यटक केन्द्र देखि तीन किलोमिटर स्थित छ। यसको अपेक्षाकृत छोटो अस्तित्व बावजूद, जटिल पहिले नै विशाल लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ।
"Splendid" होटल राम्ररी विकास पूर्वाधार र सुन्दर समुद्र तट गर्न आजकल धेरै पर्यटकहरु धन्यवाद आकर्षित गर्ने एक सानो सहरमा बनाइएको थियो। कोस्ट यहाँ यात्री लागि सुविधाजनक पेबल्स प्रतिनिधित्व गर्दछ। 1935 पेरिस मा, Becici समुद्र तट सबैभन्दा युरोप सुन्दर रूपमा ग्रान्ड प्रिक्स जित्यो।
हाल, को रिसोर्ट - धेरै पसलहरूमा, क्याफेहरू र रेस्टुरेन्ट संग आधुनिक पर्यटक केन्द्र जस्तै केही छैन। त्यहाँ एक आराम छुट्टी र सक्रिय कुराहरूलाई लागि सबै अवस्था हो। एकांत स्थान र राम्रो पूर्वाधार भएको रिसोर्ट परिवार छुट्टी लागि सही ठाउँ बनाउँछ।
आधुनिक Becici पूर्णतया पर्यटकहरु केन्द्रित। प्रशासन को मुख्य उद्देश्य - सान्त्वना र पर्यटकहरु को आवश्यकता को सन्तुष्टि।
"Splendid" (होटल, मोन्टेनेग्रो) 322 कोठा यसको कोष मा छ। तिनीहरूलाई को भन्दा को Windows समुद्र तट मा अवस्थित छ। तैपनि, त्यहाँ चार सुइट्स र तेह्र सूट, एटिक र सम्मान को अतिथि लागि लक्जरी राष्ट्रपति सुइट्स छन्।
होटल को प्रत्येक - यो एक उद्यानलाई छ। फैशनेबल भित्री डिजाइन उत्कृष्ट, मैत्री सेवा द्वारा complemented छ। प्रत्येक कोठा पनि उपग्रह कार्यक्रम फ्लैट स्क्रीन टेलिभिजन छ, आवश्यक उपकरण, नाश्ता र पेय को राम्रो चयन संग एक मिनी-पट्टी संग सुसज्जित छ।
प्रत्येक घर छ:
संग इलेक्ट्रनिक पहुँच स्वचालित ताला।
विद्युत सक्रियता स्लट।
खाट क्षेत्रमा तापमान नियन्त्रण गर्न समर्पित प्यानल छ।
बिस्तर नियन्त्रण प्यानल: सफा गर्न चिन्ता छैन कोठा मा रोशनी बन्द।
मदतको लागि कल गर्न बाथरूम मा बटन।
वायरलेस उच्च गति इन्टरनेट पहुँच।
दुई डिजिटल फोन (डेस्कटपमा र ओछ्यानमा) र बाथरूम मा एक एनालग उपकरण, साथै प्रत्यक्ष-डायल संख्या।
सबै सुइट्स एलसीडी-टिभी (विकर्ण 32 ") उपग्रह टीवी संग सुसज्जित छन्।
आगो अलार्म सेन्सर र सुरक्षा।
जुनियर-सुइट्स उत्कृष्ट समुद्र संग मानक कोठा बढी उन्नत संस्करण हो। यो विशाल कोठा राम्रो ठूलो परिवार आराम गर्न सक्छ।
होटल "Splendid सम्मेलन" (मोन्टेनेग्रो) तेह्र लक्जरी Welness-सुइट्स प्रदान गर्दछ। यी अपार्टमेन्ट परिसर स्पा र Welness को भाग हो। आफ्नो विशिष्ठ सुविधा कोठा नछोडी प्रक्रियाहरु लिन सक्ने क्षमता छ। अपार्टमेन्ट कुनै पनि दिइएको श्रेणी को क्षेत्र 84 वर्ग मीटर छ। यी सबै कोठा जीवित क्षेत्र र काम डेस्क, शवर र स्नान, एक जकूजी संग एक बेडरूम, ठूलो बालकनी संग एक बाथरूम छ, पैदल-मा कोठरी, साथै सबै प्राविधिक उपकरण।
को एटिक मोन्टेनेग्रो को तट मा सबै भन्दा शानदार कोठा को छ। यो लक्जरी संग सौन्दर्य जोडती। अपार्टमेन्ट आकार 215 वर्ग मीटर छ। त्यहाँ जक्यूजी संग धेरै बेडरूम, दुई बाथरूम र निजी स्विमिंग पूल छन्।
"Splendid" (होटल, मोन्टेनेग्रो) एक फैशनेबल आधार तिनीबारे राम्रो भन्दा अन्य सबै स्थानीय सुविधाहरु संग संख्या छ।
बार र रेस्टुरेन्टमा
मुख्य रेस्टुरेन्ट दोस्रो तल्ला मा स्थित र, स्वादिष्ट भू-मध्य समकालीन भोजन पेशकश मोन्टेनिग्रिन व्यञ्जनहरु सहित, खुला सबै दिन छ। "ला Bussola" - यो सधैं एउटा अनुकूल र न्यानो वातावरण छ। को साँझमा त्यहाँ एउटा अनुकूल वा परिवार खाने को लागि एक आरामदायक ठाँउ मा रेस्टुरेन्ट गर्नाले, प्रत्यक्ष संगीत र रोशनी मोमबत्ती छ।
होटल "Splendid" (मोन्टेनेग्रो) पनि यसको अतिथि पूर्वी र चिनियाँ भोजन गर्दछ जो "सैर" रेस्टुरेन्ट, भ्रमण गर्न प्रदान गर्दछ। उत्कृष्ट विकसित मेनु "वाइन र अन्य मादक पेय को एक धनी चयन छ।
साइट मा "Splendid" (मोन्टेनेग्रो) त्यहाँ हल्का नाश्ता संग अतिथि प्रसन्न र अन्तर्राष्ट्रिय भोजन डेसर्ट जो एक लबी पट्टी छ। फैशनेबल डिजाइन र Becici को खाडी भन्दा शानदार दृश्य द्वारा complemented एक अद्भुत वातावरण।
होटल एउटा आउटडोर छत, जो विभिन्न घटनाहरू लागि स्थल हुन सक्छ संग सम्मेलन पट्टी संग सुसज्जित छ। र साँझ मान्छे सूर्यास्त, राम्रो ककटेल र प्रत्यक्ष संगीत को अचम्मको दृश्य रमाइलो गर्न यहाँ आउँछन्।
परिसर को तेस्रो तल्ला मा "Splendid" (मोन्टेनेग्रो) समुद्री भोजन र माछा को आगंतुकों प्रसन्न हुनेछ जो "छत Sul Mare" भनिन्छ रेस्टुरा छ। विशेष मुड को Adriatic समुद्र को एक अद्वितीय दृश्य सिर्जना गर्दछ।
पूल द्वारा आराम आनन्द लिई, आगंतुकों नजिकैको एक पल्ट मा एक खाजा र एक ककटेल हुन सक्छ। को साँझमा यहाँ सांगीतिक समूहहरू छन्। साथै, "Brasseur" प्रमुख घटनाहरु खेल प्रसारण।
होटल "Splendid5*" (मोन्टेनेग्रो) अनुकूल पट्टी 'Ensenada' समुद्र तट मा पनि, शीतल पेय र मिठाईहरू विभिन्न प्रदान गर्दछ जो आफ्नो आधारभूत टूरिस्ट हेरविचार गर्नुभयो। ताजा रस, फल, आइसक्रिम र sorbets को विशाल चयन पक्कै समुद्र द्वारा एक पहिले नै अद्भुत छुट्टी sweeten। मानिसहरू तट छोड्न त्यसैले छैन र होटल फर्कन थिएन विशेष छत मा पर्यटकहरु को अनुरोध मा, पूर्ण भोजन व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
आराम गर्न मोन्टेनेग्रो बन्न सक्छ ठूलो ठाउँ। होटल "Splendid5*" मात्र होइन एक लक्जरी आवास यसको अतिथि प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि Splendid एसपीए सेवाहरूको। उपचार कोठा जटिल स्थित र सेवा को उच्च अन्तर्राष्ट्रिय स्तर संग परम्परा र मोन्टेनेग्रो को सौन्दर्य को एक मिश्रित छ छन्।
को Splendid एसपीए विदेशी उपचार भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राहकहरु अचम्मको भित्री र बुद्धिमान सेवा विस्मित। पनि छोटो समयमा यहाँ रहेको हरेक energize र सेना। स्पा शरीर मालिश र अनुहार, शरीर wraps, बाल हटाउने, स्टीम स्नान सेवाहरू, साउना, manicures र, र pedicures र थप प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ।
को Welness क्षेत्र एक बच्चाको पूल, जिम र पाँच फरक साउना, एक हिउँ शवर सहित तीन इन्डोर पूल छ। होटल मा रहन अतिथिहरूको, एक फाइदा छ: तिनीहरू मुक्त Welness धाउन सक्नुहुन्छ।
को पूल, वयस्क र सात वर्ष भन्दा पुरानो छोराछोरीलाई ठूलो र मध्यम आकारको सधैं खुला लागि जाँदा।
होटल "Splendid" (Becici, मोन्टेनेग्रो) एक धनी पूर्वाधार छ। परिसर अतिथिहरू पट्टाइ लाग्ला समय छैन। एक टेनिस कोर्ट जहाँ तपाईं कुनै पनि समयमा खेल्न सक्छन् र एक पेशेवर प्रशिक्षक आफ्नो खेल सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ को क्षेत्र मा बनाए।
यो पनि खेल क्षेत्र, एक जिम र एक एरोविक्स क्लास दिइएको सक्रिय खेल मा संलग्न प्रयोग र अभ्यास बिना बाँच्न सक्दैन छन् गर्नेहरूलाई प्रदान गर्दछ।
पर्यटकहरु पुरातन युनानी द्वारा आविष्कार भएको थियो जो पेटाङ्क भनिन्छ एक रोचक खेल, प्रस्ताव छन्। यो जुवा खेल्नु सबै उमेरका मानिसहरूलाई अपील संभावना छ।
2010 मा, क्यासिनो रोयाले खुलेको थियो, आगंतुकों अमेरिकी रूले, स्लट मिसिन, रूसी, टेक्सास, क्यारिबियन पोकर, इलेक्ट्रोनिक रूले प्रदान गर्दछ।
खेल मैदान हेलिकप्टर
परिसर को छत यसको आफ्नै छ हैलीपैड, एउटा सानो विमान ल्याउँछ जो। कर्मचारी एकदम आधा एक घण्टा आगंतुकों को स्वागत को लागि तयार। साइट आधुनिक शैलीमा निर्माण गरिएको छ, लिन-बन्द र अवतरण दिन को समयमा र राति दुवै सम्भव छ।
के यसको कान्छो आगंतुकों होटल "Splendid" (मोन्टेनेग्रो) प्रस्ताव? अतिथि को समीक्षा, यो जटिल मा vacationing छन् छोराछोरीको अवकाश को अद्भुत संगठन कुरा। होटल एक बच्चाको महल छ मा, जहाँ त्यहाँ बच्चाहरूको लागि विभिन्न खिलौने को एक ठूलो संख्या र razvlekalok छन्। एनिमेटरहरू बच्चाहरु को लागि सक्रिय घटनाहरु, प्रतियोगिताहरु संगठित। यो पनि कला आपूर्ति, कला, hendmeyda प्रदान गर्दछ।
महल तीन वर्ष भन्दा पुरानो बच्चाहरु स्वीकार्नुहुन्छ। साथै, आमाबाबु एक शुल्क सम्भालना लागि आदेश गर्न सकिन्छ।
होटल समर्पित विशेषताहरु द्वारपाल सेवा। यो सेवा, एक कार, पुस्तक हस्तान्तरण भाडामा कुनै पनि रेस्टुरेन्ट मा एउटा टेबल बुक परिसर को पाहुनाहरूलाई सबै सम्भव सहायता हुनेछ मदत गर्नेछ।
होटल फरक स्तर को व्यापार घटनाहरू लागि एक उत्कृष्ट स्थल हो। यो सानो सभा र प्रमुख सम्मेलन दुवै हुन सक्छ। विभिन्न spaciousness धेरै विशेष कोठा उपस्थिति कुनै पनि सभा व्यवस्थित गर्न अनुमति दिन्छ।
होटल "Splendid" पनि विवाह लागि सेवाहरू प्रदान गर्दछ। यो जटिल धेरै सुविधाजनक, मोन्टेनेग्रो कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यहाँ प्राप्त गर्न पर्याप्त छिटो भएका पाहुनाहरूलाई लागि राम्रो स्थित छ। होटल कर्मचारी मात्र विवाह व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्नेछ, तर पनि सबै अतिथि, साथै एक मनोरञ्जन कार्यक्रम समायोजित गर्न।
को unconditionally खुसी टूरिस्ट होटल "Splendid" (मोन्टेनेग्रो)? सबै अतिथि पक्कै समुद्र तट स्पर्श हुनेछ समीक्षा। र साँच्चै, यो असम्भव न्यानो शब्दहरू भन्न छ। होटल यसको आफ्नै समुद्र तट, सुसज्जित राम्रो छ। त्यहाँ एक आरामदायक रहन को लागि सबै छ। यसको क्षेत्र मा शीतल पेय, नाश्ता र पनि भोजन सेवा एक पल्ट छ। समुद्र तट pebbly र धेरै सफा। त्यहाँ पाहुनाहरूको प्रसन्न तुल्याउने sunbeds एक समस्या कहिल्यै छ। ठाउँ कब्जा गर्न हतारमा छैन। सामान्य मा, यो मात्र समीक्षा प्रशंसा छ जो होटल, मा स्थान हो। उहाँले जटिल को एक indisputable फाइदा छ। के राम्रो समुद्र तट र समुद्र तटीय रिसोर्ट गर्न न्यानो समुद्र भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ?
"Splendid सम्मेलन" (मोन्टेनेग्रो): समीक्षा
अग्रिम मा आफ्नो छुट्टी योजना बनाउँदा, धेरै सबै विवरण मार्फत लाग्छ र मौका भर छैन। विशेष गरी यो यात्रा गन्तव्य र होटल को विकल्प को प्रश्न हो। यो बाँकी गुणस्तर सिधै निर्भर कारणले अप, एक सभ्य रिसोर्टमा छनोट गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। स्वाभाविक, क्रमबद्ध विकल्प, सबैलाई एक विशेष स्थानको भ्रमण गर्ने मान्छे को प्रतिक्रियाहरू अध्ययन गर्न प्रयास गरिरहेको छ। धेरै अर्थमा तिनीहरूले होटल मा एक राय गठन। सेवाको गुणस्तर पत्ता लगाउन एक साधारण तरिका - को पाठ्यक्रम, प्रत्येक व्यक्ति को धारणा फरक तर तैपनि प्रयोगकर्ता मूल्याङ्कन छ।
यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ कि अतिथि होटल "Splendid" विभिन्न समयमा थिए: पान Gi MUN, बिल क्लिंटन, madonna, को कलाकार पनि रोलिंग पत्थर, ब्राड पिट र Andzhelina Dzholi, पावेल मुफ्त, cosmonaut ओलेग Kotov र धेरै अन्य सेलिब्रेटीहरू। यो सूची गम्भीर जटिल एक उत्कृष्ट विज्ञापन रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेलिब्रेटीहरू एक विशेष तरिकामा सेवा भनेर स्पष्ट छ। र के समय मा पकड मा उनि सरल अतिथि भन्छन्?
मात्र सकारात्मक यो जटिल बारेमा समीक्षा। धेरै प्रशंसा सुन्दर बीच र सुन्दर स्पष्ट समुद्र योग्य हुनुहुन्छ। सन्तुष्ट अतिथि र कोठा आंतरिक, साथै पूर्ण सेट छन्। होटल कर्मचारी लागि जाँदा, पर्यटक शिष्टाचार, क्षमता र मदत गर्न इच्छा भन्छन्।
मेहमान जटिल मा शक्ति पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यहाँ खाना स्वादिष्ट र सन्तोषजनक, वैविध्यपूर्ण मेनु छ। म एक धनी बुफे खुसी छु। पर्यटकहरु अनुसार, रेस्टुरेन्ट कर्मचारी सहयोगी, आदेश चाँडै पूरा गर्दै छन्, दयालु व्यवहार।
म वयस्क लागि होटल र साँझ एनिमेसन खुसी छु। यसलाई आराम गतिविधिहरु, नृत्य कार्यक्रम को एक किसिम को लागि मनोरंजन गतिविधिहरु सबै प्रकारका होस्ट।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, होटल एक स्पा जटिल छ। उहाँको बारेमा समीक्षा थोडा असंगत। आफ्नो सेवा र कसैले जस्तै कसैले यसलाई अपर्याप्त स्तर भेट्टाउनुहुन्छ। हुनत, सामान्य मा, स्पा सबैभन्दा सुखद अनुभव, आराम र आफ्नो छुट्टी रमाइलो गर्न मदत उत्पादन गर्छ।
होटल "Splendid" एक स्वतन्त्रित छुट्टी, समुद्र द्वारा यस्तो सुन्दर ठाउँमा खर्च गर्न नयाँ सुखद अनुभव हासिल शरीर र प्राण आराम एक यात्रा लायक छ। र घर मात्र सबै भन्दा राम्रो सम्झनाहरु ल्याउन।
होटल Grbalj3* (मोन्टेनेग्रो / Budva रिवेरा): समीक्षा
होटल "केन्द्रीय", Kirov। समीक्षा, मूल्य
Nalchik होटल: विवरण, समीक्षा, ठेगाना
होटल "पुरानो Rostov" (Rostov-मा-डन): विवरण, फोटो र समीक्षा
मस्कट - ओमान गरेको enchanting राजधानी
होटल होटल Splendid सम्मेलन स्पा रिजोर्ट5* (मोन्टेनेग्रो / Budva रिवेरा): फोटो र समीक्षा
कसरी स्नान देखि खुशी प्राप्त गर्न कुचो zaparivat गर्न
को डराने दूर लामखुट्टे? Fumigators र मोबाइल फोन
Hydrangea बगैचा: रोपण, खेती, हेरविचार
होटल कोरल बीच होटल Hurghada4*, मिश्र, Hurghada: समीक्षा, वर्णन र समीक्षा
सर्गेई Aksenenko - एक महान लेखक र एक चिरपरिचित व्यक्तित्व
को ब्याजर आकर्षित गर्न कसरी विवरण
धार्मिक समारोह र समाज यसको प्रभाव
फुकेत मास्को समय फरक: थाईल्याण्ड मा बिदाहरू
एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न - कति महिनामा बच्चा हिंड्न थाले!